Mampihatra lalàna ny polisy sy ny zandary: tratra ireo mpampiady akoho, tompona babyfoot, mpilalao roller | NewsMada
Mampihatra lalàna ny polisy sy ny zandary: tratra ireo mpampiady akoho, tompona babyfoot, mpilalao roller
Mampitangorona olona, tsy manaja fepetra… Olona milalao baolina kitra, mpitsangantsangana, mpisotro toaka ao amin’ny toeram-pisotroana (bar) miisa 70 indray no nosamborin’ny polisy teny Androhibe, Ivandry, Masay ary Alarobia, ny faran’ny herinandro teo.
Nandritra ny asa fisafoana manoloana ny fepetra rehetra momba ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina covid-19 no nahatrarana ireo olona, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy. Olona roa tompona baby foot koa no saron’ny polisy teny Andohatapenaka rehefa fantatra fa mampitangorona olona eny an-toerana amin’ity kilalao iray ity. Andian’ankizy maromaro koa no tratra nilalao roller teny Anosibe satria nanararaotra ny halalaky ny lalana, tamin’io fotoana io ihany. Nosamborina ireto ankizy ireto ka navotsotry ny polisy rehefa nanarina teny amin’ny biraon’ny kaomisaria. “Tsara ny manamarika fa ankoatra ny sazy omena ireo olona tsy manaraka ny fepetra dia mananatra azy ireo koa ny polisy ka ireto olona voasazy ireto indray no hananatra ireo olona minia tsy manara-dalàna eny anivon’ny fiarahamonina eny”, hoy ny fanazavan’ny polisy.
Noraisim-potsiny ireo mpampiady akoho…
Telo lahy miaraka amin’ny akoholahy mpiady no voatery nosamborina ka naiditra violon avy hatrany, ny alahady 26 jolay 2020 teo tao Andranonahoatra sy tao amin’ny toerana fampiadiana akoho ao ambadiky ny Socolait Ambohimena Antsirabe. Nohamafisin’ny zandary fa ny adin’akoho dia tsy maintsy hivorian’olona tsy latsaky ny 200 farafahakeliny. Noho izany, enjehin’ny lalàna izay tratra mampiady akoho ka miteraka fivorivorian’olona marobe, indrindra amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Nambaran’ny zandary fa tsy ananana indrafo fa ny mpitandro filaminana no anankinan’ny vahoaka fahatokisana mba hanafay ireo zatra mandika lalàna. “Entanina ny tsirairay mba ho tonga saina tsy hiafara amin’ny fisamborana toy izao. Tsy ekena ny famoriana olona manaparitaka valanaretina. Tsy fitiavanao akoho miady no hahazoanao areti-mandoza eto”, hoy ny fanazavan’ny zandary. Tsikaritra tato ho ato fa misy hatrany ireo sokajin’olona sasan-tsasany minia mandika ny lamina sy ny fepetra rehetra napetraky ny tompon’andraikitra amin’izao fiparitahan’ny valanaretina coronavirus izao. Ny marary sy ny isan’ny maty anefa tsy mitsaha-mitombo hatrany.